व्रत वसेको वेलामा सेक्स गर्न हुन्छ की हुदैन ? सवैको चासोको विषय हुनसक्छ । बिशेष गरी तीजको व्रत वस्ने नेपाली महिलाहरूलाई यो चासो बढी हुन्छ । नेपालमा विभिन्न धार्मिक र पैत्रिक अनुष्ठानमा व्रत बस्ने...
बैबाहिक जीवनको शुरुवातमा जोडीहरुमा जुन यौनिक उत्साह देखिन्छ । त्यो विस्तारै कम हुँदै जान्छ । र यही यौन उदासिनताका कारण कतिपय जोडीमा असन्तुष्टी बढ्दै जाने र सम्बन्ध नै विग्रने समेत हुन्छ । खासमा यौन चाहाना...
क्यान्सरबाट बच्ने यी १० उपाय
क्यान्सर एउटा निकै भयानक रोग हो । यस रोगको कारण वर्षेनी लाखौ मानिसहरुको ज्यान जाने गर्छ । अहिलेको समयसम्म पनि यस रोगको औषधी पत्ता लगाउन नसकिएकाले यस रोगलाई डरलाग्दो रोग भनिएको हो । यस...
काठमाडौं स् नेपालमा पहिलो पटक बर्डफ्लु ९एच छ एनज्ञ० बाट मानिसको ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा २१ वर्षीय युवकको बर्डफ्लुबाट मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ । मानिसमा संक्रमण भएको यो...
महिनावारीको समयमा यौन सम्बन्ध राख्न हुन्छ कि हुँदैन ?
काठमाडौँ । महिलाका लागि प्रसव पछिको पीडा महिनावारी हो । धेरै जसो महिलाहरु महिनावारीको समयमा हुने दुखाईबाट पीडित हुन्छन् । महिनावारीको बेला महिलाको शरीरमा अनेक प्रकारका हार्मोनल परिवर्तन हुने गर्छ । यो समयमा महिलाहरुले खानपान...